Sida loo sameeyo Flash bandhigid Muqaal ah ee Website
Qeybiso leeyihiin bandhigga oo aad rabto in aad yaabiyo dhagaystayaasha? Maxay ku saabsan samaynta bandhig flash ah oo aad sawiro, qoraalo, iyo in ka badan. Si taas loo gaaro, Wondershare Flash Gallery Factory noqon doonaa mid caawisa oo wanaagsan. Waa sahlan in la isticmaalo barnaamijka flash slideshow kaas oo bixiya malaayiin fursadaha u bandhigyo la 2D kala duwan oo qurux badan iyo 3D arrimo flash aad.
1 dejinta photos iyo music jeeda
Si sawirrada dhijitaalka ah ku darto, waxaad sidoo kale riixi kartaa ah "Add sawir" button ama kaliya jiidi sawiro si ay storyboard ah . Haddii aad rabto in aad ku darto music soo jeeda, waayo, taasu flash sawir gallery, riix "Add Music" badhanka si ay u dajiyaan jeeda music aad.
2 Dooro template gaar ah flash bandhig
Flash Gallery Factory bixisaa badan arrimo slideshow photo free .Waxa aad codsan kartaa mid aad ugu jeceshahay in aad dalbato ama aad u astaysto template gaar ah adigoo gujinaya ka tagay hoos "Custom Template" button.
Waxaa jira 100-guurka iyo mooshin saamaynta si aad u doorato. Si aad u dhigay saameynta kala guurka, kaliya jiidi saamaynta gudbida dhexe ee labada sawirada . Marka dejinta saamaynta mooshin, kaliya jiidi saamaynta suuradda qaarkood.
"Qurxisaa" aad flash bandhig la qoraalka, cliparts, animations iyo dhawaaqa funny. Guji "Text New" in lagu daro qoraalka, font la xusho, size, midabka, saamayn qoraal, iwm sawiradaada. Sidoo kale, ku dari qurxinta kale. Sidan, slideshow bandhig flash la music noqon doontaa mid ka cajiib ah iyo is-dhexgal.
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo daabacaan aad flash bandhig
Haddii aad ku qanacsan tahay shaqadaada, waxay doortaan in ay u badbaadin in qaabab Jabbuuti, html, exe, ama screensaver . Waxa kale oo aad soo diri kartaa slide show flash in ay saaxiibadaa si toos ah sida hawl hadiyad ah. Intaa waxaa dheer, aad gali kartaa in aad web server, ka dibna la wadaagno flash slideshow on MySpace, Facebook, Twitter hal-riix ka dib markii koombiyuutarka guul.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ku darto hyperlinks dhamaadka slideshow ah, fadlan la furo "naadiya Dejinta" oo dooro "Action dhamaadka flash ah" item.
Tani waa dhamaadka tutorial flash slideshow ah. Sida aad ka arki, waa arin aad u fududahay in aad kartoo slideshow ilmaha, slideshow arooska, slideshow qoyska, iwm in ay soo bandhigaan on website. Hadda bilaabaan si ay u sameeyaan slideshow flash for web bandhig!
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Flash bandhigid Muqaal Tutorial